Legacy of Discord-FuriousWings 3.0.1 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 3.0.1 လြန္ခဲ့ေသာ 8 မိနစ္က
ဂိမ္းမ်ား အက္ရွင္ Legacy of Discord-FuriousWings
Legacy of Discord-FuriousWings ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
သငျသညျ, hack လျှော့ချနှင့်ကျယ်ပြန့်စိတ်ကူးယဉ်ကမ္ဘာကအားဖြင့်သင်တို့၏သွားရာလမ်းဗုံးအဖြစ်အတွေ့အကြုံကိုပြင်းထန်သော Real-time တိုက်ခိုက်ရေး! သစ္စာပျက်သောထောင်ထဲက RAID ဒါမှမဟုတ် Arena အတွက်ပြိုင်ဘက်များနှင့်အကြီးစား PvP ပွိုဆန့်ကျင်တိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားရန်သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူပါတီ။ တစ်ဦးစုံတဲ့စစ်သည်ကနေစစ်ပွဲတစ်ခုကိုလညျးမတားဆီးဘုရားသခင်အားကိုယ့်ကိုယ်ကို upgrade နှင့်အသွင်ပြောင်း!
နယူးအတန်းအစား - ရုပ်သေးမာစတာ
စစ်တိုက်ခြင်းငှါသူမ၏စက်မှုလယ်ယာရုပ်သေး manipulate နိုငျသောသေစေနိုင်သောရည်းစားနောက်ဆုံးတော့လောဒမွို့အတွက်သူမ၏ပွဲဦးထွက်အောင်ဖြစ်ပါတယ်။ ဂိမ်းထဲသို့ဝင်ခြင်းနှင့်လိုအပ်သော Quest များပြီးဆုံးကြောင်းမဆိုကစားသမားချက်ချင်းအသစ်ကရုပ်သေးမာစတာအတန်းအစားခံရလိမ့်မည်။ Mech activated! Mega ကိုထိုးကြိတ်!
အစည်းအရုံးတိုက်ပွဲများ4Guilds လူ 20 ယူလာတစ်ဦးချင်းစီ၏ cross-server ကိုစစ်တိုက်သည်။ ဒီပြင်းအား၏တစ်ဦးကတိုက်ပွဲဖြစ်သည့်ဘုံတလျှောက်လုံးဂယက်ရိုက်စေပါတယ်လိမ့်မည်ဟုအဆင်းလှသောပရမ်းပတာကိုဖန်တီးရန်ခညျြနှောငျဖြစ်ပါတယ်။ တိုက်ပွဲများ, စည်းလုံးမှုမှတဆင့်ဒဏ္ဍာရီမှတစ်ဆင့်ရိုသေစွာပြုလော့။
ဝေဟင်မှစစျပှဲမြား featuring နယူးပျံ Edition ကို!
ငါပျံသန်းနိုင်တယ်လို့ယုံကြည်တယ်! အားလုံးအသစ်က SkyWings system ကိုသင်လေကြောင်းရန်သင့်တိုက်ပွဲများယူပေးနိုင်ပါတယ်! အသစ်ကထောင်ထဲကိုတွေ့ကြုံခံစားနှင့်သင်မိုဃ်းတိမ်အောင်နိုင်အဖြစ်မော်ကွန်းပျံအကြီးအကဲတွေရင်ဆိုင်ရ!
-Brilliant 3D ဂရပ်ဖစ်နှင့်အထူးသက်ရောက်မှုစစ်တိုက်ရဲ့အလယ်မှာရှိတဲ့၌သင်တို့ကိုထည့်လေ့မရှိ
-Highly အသေးစိတ်ဇာတ်ကောင်များနှင့်အရည် animations တွေကိုပုတိုက်ခိုက်ရေးအစာရှောင်ခြင်းနှင့်ပြင်းထန်သောစောင့်ရှောက်
-Real အချိန် CO-OP နှင့် PVP တိုက်ခိုက်ရေး action ကိုရပ်လိုက်ဘယ်တော့မှဆိုလိုတယ်
ပစ္စည်းများနှင့်ပစ္စည်းကိရိယာ၏ -Hundreds ပြိုင်ဘက်ကင်းဇာတ်ကောင်စိတ်ကြိုက်ထောက်ပံ့
ဒဏ္ဍာရီ Wrathwings -Unlock နှင့်ကြီးကျယ်သောအာဏာကိုပေးရန်စစ်တိုက်ရာတွင်သူတို့အအသွင်ပြောင်းစောင့်ကြည့်
မိုဘိုင်းပေါ်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုးမြှင့်ဖို့မြေပြင်ကိုတက်ကနေ built အထူးဂိမ်းအင်ဂျင်ကို
optimized Touch ကိုထိန်းချုပ်မှုနှင့်အတူကြီးကျယ်သောကျွမ်းကျင်မှုနှင့်ကွင်းဆက်အကြီးအကျယ် combo တိုက်ဖျက်မည်
နောက်ဆုံးပေါ်သတင်းနှင့်ကြေငြာချက်များဘို့ငါတို့အရာရှိတဦးက Facebook စာမျက်နှာနှင့်ဖိုရမ်သို့သွားရောက်
တရားဝင် Facebook မှ: https://www.facebook.com/LegacyOfDiscordFW
Legacy of Discord-FuriousWings အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Legacy of Discord-FuriousWings အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Legacy of Discord-FuriousWings အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
bds-store စတိုး 9.47k 6.08M
Legacy of Discord-FuriousWings ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Legacy of Discord-FuriousWings အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 3.0.1
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ http://www.gtarcade.com/terms.html
Release date: 2019-02-22 22:27:20
လက်မှတ် SHA1: EF:EE:F4:0D:43:F2:70:2B:E4:BD:B7:6F:C9:27:96:CC:0E:07:68:D2
ထုတ်လုပ်သူ (CN): aoktian
အဖွဲ့အစည်း (O): teayelp
Legacy of Discord-FuriousWings APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ